Nwa Friday 2015 | Akụkọ akụrụngwa
N’abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Nọvemba na-abịa bụ mgbe a ga-eme ya na Spen na mba ụwa mara dịka Black Friday, ụbọchị jupụtara na onyinye nke ọtụtụ n'ime anyị na-eche ọtụtụ izu iji nwee ike inweta ihe nwere ọnụ ala dị ntakịrị. Agbanyeghị na anaghị eme emume ụbọchị a rue Fraịde na-esote, ọtụtụ ụlọ ahịa, ma n'ịntanetị ma nke anụ ahụ, amalitelarị ịmalite mmalite na mbupute mbụ, ọ bụ ezie na o yiri ka ọkụ ọkụ ọkụ ikpeazụ agaghị abịa ruo ụbọchị n'onwe ya.
Maka ihe a niile, site taa, anyị ga-achịkọta n'isiokwu a ụfọdụ onyinye kacha mma, metụtara Black Friday, nke anyị niile nwere ike ịba uru. Ọ bụrụ na ị ga - azụ ahịa ma ọ bụ chọọ ka emee ka ị mata maka onyinye na ego niile maka ụbọchị ole na ole ndị a, chekwaa edemede a na ọkacha mmasị ma lelee ya kwa ụbọchị ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla.
3 Ihe PC
4 Mgbasa ozi mgbasa ozi
5 Ndị na-arụ ọrụ igwe
7 Ndị ọzọ na-enye
10 Wolder Eletrọniki
17 Na-egwuri egwu
Companylọ ọrụ nke Jeff Bezos na-agba ọsọ bụ ịrụ ụka adịghị ya na otu n'ime ụlọ ahịa ndị na-agba Black Friday kachasị, na site taa rue ụbọchị na-esote 30 anyị ga-aga ọtụtụ ego na onyinye nke ahụ ga-akpali gị mmasị dị ukwuu.
N'ebe a, anyị na-egosi gị ụfọdụ onyinye kachasị adọrọ mmasị.
Ego nke € 300 anyị enweghị ha kwa ụbọchị, mana anyị na-eme na Black Friday, ebe anyị na-ahụ igwefoto Olympus PEN E-PL6 - Ihe eji eme ihe na M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ lens na SD Flash Air 8 GB WiFi kaadị (16.1 Mp, 3 ″ ihuenyo, elekere elektrọnik, ndekọ vidiyo), ojii, na mbelata 48%, nke dị na igwefoto a bụ € 289 iji nọrọ na ọnụahịa ikpeazụ nke € 310.
Drones dị na ejiji na icheoku na-enye anyị taa AR Oke ohia ndi ugwu nke 2.0 na mbelata 33%, nke hapụrụ ya na .199,99 XNUMX.
Akwụsịla Music! Na Sennheiser HD 598 - Mepee ekweisi isi okirikiri, nwa ojii nwere ọnụego 57%, ọ ga-adị na ọnụahịa nke € 99.
Chọrọ ama? Ọfọn ị nwere ike nweta Motorola Moto G (Ọgbọ nke atọ) na mbelata 20%, nke hapụrụ ya na ọnụahịa ikpeazụ nke € 159,90.
N'ihi na ọ bụghị anyị niile chọrọ ama iji were foto, taa Sony ILCE-5100 - 24.7 Mp Igwefoto ọjọọ (3 ″ ihuenyo, ngwa anya stabilizer, Full HD vidiyo), nwa - Igwe eji arụ ọrụ igwefoto na ele E PZ 16-50 mm f / 3.5-5.6 nwere ego nke 47% ma ọ nọrọ na € 345.
Ihe 500GB Esemokwu SSD siri ike nke XNUMXGB Samsung 850 EVO ojii bụ taa nwere mbelata 49% wee dịrị 129,90.
El Gbasara akwukwo Paperwhite Ọ bụ otu n'ime akwụkwọ elektrọnik kacha mara amara ma na-adọrọ mmasị na ahịa yana n'oge ụbọchị a, anyị nwere ike ịchọta ya na ego 20 euro.
NBA 2K16 maka nyiwe dị iche iche na ọnụ ahịa pụrụ iche
Zte Agụba S6 Gụnyere na mbelata 15%
Ọnụahịa pụrụ iche na Acer Aspire E1-572G-74508G50 ya na Intel Core i7 processor
Ikuku kiiboodu Logitech K400 na mbelata 50%
Ebi akwụkwọ HP LaserJet Pro P1102w na mbelata 33%
Alcatel Otu Touch Watch na mbelata 30%
Sony Xperia Z2 na mbelata 33%
PS4 + FIFA 16 + Uncharted Collection Pack maka euro 379
Philips Hue 3 Bulb Ngwaọrụ, E57
maka euro 149,89.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe oge egwuri egwu, ị nwere ike ịmasị ịnye ihe a Nintendo 3DS - XL njikwa, pink agba, nke taa nwere ego 30% ma nọrọ na ọnụahịa nke 139 XNUMX.
En FNAC Ha chọkwara ịtụ anya Black Friday na n'oge taa na echi anyị ga-erite uru site na ntinye dị iche iche. Nwere ike ịlele niile ego na-enye na njikọ a. Ọzọkwa N'oge Black Friday anyị nwere ike irite uru site na ọtụtụ narị onyinye ụbọchị niile, ma na ụlọ ahịa n'ịntanetị na n'ụlọ anụ ahụ dị iche iche a na-ekesa na Spain.
Bryton 40E Obi Ọnụego Nyochaa na GPS agbakwunyere maka euro 134,99
N'ime taa na echi FNAC ga-ewepu VAT na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa ya. Pụrụ ịhụ nkwalite HERE.
Ihe PC Ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa dị n'ịntanetị a kacha mara amara na n'ezie anyị ga-enwekwa ọ offersụ n'ime izu. N'okpuru ebe ị nwere ike ịhụ mmemme nke onyinye na ego ha ga-enye anyị;
Mọnde 23: awade na kọmpụta na akụkụ
Tuesday 24: awade na smartphones, wearables na mbadamba
Huawei Takband B2 acha ọcha maka euro 99
ASUS Zenwatch site 169 euro
Wednesday 25: awade na ụlọ na multimedia ngwaọrụ
Tọzdee 26: awade na egwuregwu na PC
Fraịde 27: nnukwu ụbọchị, Black Friday nwere nnukwu onyinye na ngalaba niile
Nintendo 3DS XL uhie maka euro 139
Media Markt ga-enwe onyinye na ngwụsị izu niile, na ngalaba ya niile. Offọdụ n'ime ha ị nwere ike ịhụworị na njikọ ọzọ.
N'ime ụbọchị ndị na-esote, anyị ga-ahọrọ ụfọdụ onyinye na ego kachasị mma ma anyị ga-egosi gị n'isiokwu a.
Ndị na-arụ ọrụ igwe
Apple MacBook Pro 13,3 ″ i5 2,5GHz | 16GB Ram | 1TB SSD na ego 38%. Nwere ike ịzụta ya HERE.
Apple Magic kiiboodu Spanish Mac kiiboodu maka ego nke 103 euro. Nwere ike ịzụta ya na njikọ ọzọ.
En nrutu anyị pụrụ ịchọta a dum nhọrọ nke ngwaahịa na succulent ego. Pụrụ ịhụ zuru ngwaahịa katalọgụ na ndị na-esonụ njikọ.
Ndị ọzọ na-enye
Obere ala wedata nche gị niile ruru 35% na ụfọdụ ụdị
Elu 3 2 GB Ram na 64 GB nke nchekwa maka euro 499
Elu 3 4 GB Ram na 128 GB nke nchekwa maka euro 599
Na Pro 3 ya na Intel i5 processor, 4 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa maka euro 998,10
Surface Pro 3 na Intel i5 processor, 8 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa maka euro 1.269
Surface Pro 3 na Intel i7 processor, 8 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa maka euro 1.349
Xbox One 500 GB maka euro 329
Xbox One 500 GB + Kinect maka euro 449
Microsoft Lumia 640 Dual SIM maka euro 143,65
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM maka euro 169,15
Ego n'etiti euro 12 na 30 na egwuregwu vidio maka Xbox One na Xbox 360
20% ego na iPad
20% ego na Mac
10% ego na iPhone
15% ego na Apple ngwa
10% ego na Apple Watch.
Ntinye 70% na ngwaahịa ngwaahịa site na ụlọ ahịa
Na-enweghị VAT na nzụta nke ngwaahịa gị niile.
Ego ruru 50% na ngwaahịa gị maka Black Friday.
Ngwunye ngwaahịa kọmputa na-enye ego na ngwa ya, onyinye na-aba uru ruo Mọnde 30.
TED Baker ekweisi jiri ego 72% belata.
Sphero Star Wars Robotic Ball maka euro 165,99.
BT BoomBrick okwu na mbelata nke 66%
8GB Star Wars Darth Vader / Yoda / R2D2 / Stormtooper USB Flash Draịvụ maka naanị euro 18,99.
Omume Igwefoto Igwefoto HD5 ọkara ọnụahịa.
Samsung Qi Ndenye chaja chaja maka naanị euro 43,49.
Olixar Selfie Stick na enyo jiri ego 62% belata.
IMusic amfụfụ Ohiri Isi maka euro 21,99.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke onyinye ahụ Egwuregwu Igwe ejikere anyị akwadebela maka Black Friday, mana ọ bụghị naanị ha.
La ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Fitbit na-enye ego na ngwaọrụ ya niile, site na Ọsọ Kachasị ọhụrụ ruo na ZIP kachasị mkpa.
Wuaki TV na-enye mgbazinye nke ihe nkiri maka 0,99 Euro. Dị nnọọ fanye dere »blackfriday» maka ego a ga-etinye. Dị irè ruo November 28.
Storelọ ahịa a na-ewu ewu nke Juguetrónica anọghị n’azụ ma kwadebere onyinye maka Black Friday nke na-aga 40%. Kpọmkwem, anyị na-ewetara Roborover, robot nke na-ebelata ọnụahịa ya site na euro 99 ruo euro 49,90. Nke a abụghị a Ọhụrụ a tọhapụrụ robot ma ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ na ego ọnụ.
Youkwadebelarị kaadị gị iji bibie ya Black Friday a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Black Friday 2015; ego, onyinye na otutu ihe
Xiaomi Redmi Rịba ama 3 bụrịrị gọọmentị ma ọ bụghị naanị na-etu ọnụ ọnụahịa kamakwa nke imewe na nkọwa